PSJTV | डेंगुको डरले लामखुट्टे फोबिया ! नियन्त्रणका लागि महाअभियान चलाउँदै सरकार
३० वैशाखमा धरानमा देखिएको डेंगु करिब चार महिनामा ५६ जिल्लामा फैलिएर महामारीको रूप लिएपछि सरकारले नियन्त्रणका लागि ‘महाअभियान’ चलाउने भएको छ। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, विद्यार्थी र स्वयंसेवकलाई डेंगु प्रभावित क्षेत्रका घरघरमा खटाएर नियन्त्रण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।
एमाले नेता वामदेव गौतम, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा। सन्दुक रुइतलाई डेंगु भएको छ । त्यस्तै, शुक्रराज अस्पतालका लालबहादुर वैबा, शारदा दाहाल, रवीन्द्र अर्याल र डा. असीम कँडेल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत फिरोज महर्जन, लक्ष्मी अधिकारी र सीताराम भण्डारीलाई पनि डेंगु संक्रमण भएको छ । टेकुमा मात्रै १३ स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगु संक्रमण भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सरकारले डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि यस वर्ष सात करोड ९३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
डेंगुबारे जानकारी कम हुँदा सर्वसाधारणलाई ‘लामखुट्टे फोबिया’ हुन थालेको छ । जुनकुनै लामखुट्टेले टोक्दा पनि डेंगु हुने डरले सताएको छ ।
कैयौँ व्यक्ति आत्तिँदै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा.शेरबहादुर पुनले आफूकहाँ आइपुगेको एक प्रतिनिधि घटनाबारे भने, ‘बालाजुकी एक महिला साथीका दुई बच्चालाई डेंगु लागेको थाहा पाएपछि भेट्न गइन् । घर फर्किंदा उनलाई एउटा लामखुट्टेले दाहिने खुट्टामा टोकेछ । लामखुट्टे मारिन् । तर, त्यसलगत्तै ती महिलाको खुट्टा झमझमाउन र दाहिने कम्मर दुख्न थाल्यो । डेंगु पो लाग्यो कि भनेर उनी आत्तिँदै टेकु अस्पताल आइपुगिन् । लामखुट्टे फोबियाले सताएर उनी यो अवस्थासम्म पुगिन्।’
दसैँ तिहारपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने प्रयासमा भारतीय संस्थापन पक्ष देखिएको छ। भारतीय पक्षले नेपालको राजनीतिमा धार्मिक रंग भर्ने प्रयास गरेको खबर आजको साँघु साप्ताहिकले छापेको छ। भारतीय पक्षले यस विषयमा ...